Iplanethi evulekileyo, amaPhepha angama-77 ukutshintsha ingqondo-iGeofumadas
NgoDisemba, 2011 Geospatial - GIS, GvSIG, ezintsha
Ibe ngunyaka okhutheleyo kakhulu kwiiseshini ze-gvSIG, sibe nazo e-Italy, e-United Kingdom, e-France -kwisakhelo samazwe angama-francophone-I-Uruguay, iArgentina neBrazil- i-Latin America- kwaye ngokwesiko, nantsi inguqulelo ye-Open Planethi ehamba neenkomfa zamazwe aphesheya kwe-gvSIG. Kodwa isiqulatho sayo asikho isithethe, Ndiyakhe le nqaku usebenzisa ezinye zeengcaphuno endifumene zingenakuthembeka, ezifana nesigxina kunye nephulo le-GvSIG Foundation liye laqhubeka ezinyangeni ezimbalwa
Kodwa siqwalasele ukuba ayonelanga, ukuba kuyafuneka ukuba uthathe elinye inyathelo. Kwaye kunjalo, njengeprojekthi esiyifunayo kwaye sisebenzele ukoyisa izithuba ezitsha, izithuba ezingekazuzwa nge-geomatics yasimahla kwaye igcinelwe abo bathelekelela ubunini bolwazi. Ufikile
umzuzwana wokunganeliseki, ngokuqhubeka nokusebenza kunye nokulungelelanisa ukuze ulwazi, iteknoloji, i-geomatics yinto enhle yonke, ifumaneke kuwo wonke umntu. Ngaphandle kokushiya nayiphi na into
Imagazini n Ucinga ukuba kukucwangciswa okubalulekileyo kwemigaqo uMbutho obhejayo kuyo, uthathela ingqalelo ukuba abo kufuneka betshintshe idiski kuqala ngabasebenzisi, abathi uninzi lwabo abanalo ithuba lokuzimasa usuku ngobunewunewu. yomxholo njengoko yayiyeyokugqibela. Ikwabonakala kuthi ngokungqinelanayo nenqanaba elilandelayo, ngokuqhubeka nemigaqo esikhumbuza amagama eentsuku zangaphambili:
Ngokwenyani, ukubheja ngumceli mngeni onamandla, kwanokuba baninzi abanokukujonga njengenkohliso. Kodwa iimeko ezikhoyo zisikhumbuza ukuba kwiminyaka embalwa edlulileyo i-gvSIG esinayo ngoku ibiliphupha kwiintloko zabambalwa; Andibhekiseli kwisoftware kodwa kwiprojekthi enombono wokuzinza ngokusekwe kubume bamanye amazwe kunye nokuphunyezwa kwemodeli entsha yokusebenzisana. Njengoko uGabriel Carrión esitsho, «Iminyaka eyi-7 eyadlulayo yayikholelwa ukuba siza kuphazamiseka ngentando yethu ... kodwa nanamhlanje siye safikelela kwindawo eyabonakala ingenakwenzeka. Njengoko isiqubulo seentsuku zesibini sathi, "sakha izinto eziyimfuneko".
Ndiye ndigxeke ngexeshana ngoku ngombono wam ibubuthathaka beeprojekthi ze-OpenSource: uzinzo. Kodwa kufuneka ndivume, kungekuphela ngenxa yezibakala kodwa nangenxa yokungaqiniseki kwam kwixesha elidlulileyo, ukuba ndimamele imfudumalo abasebenzisi abayithethayo malunga nendlela ababandakanyeka ngayo kwi-gvSIG e-Itali, Russia, Costa Rica, Mexico, Uruguay, Argentina, Peru, IBrazil, iChile, iColombia kunye neBolivia yinto ebalulekileyo yokukhuthaza ukukhula koluntu. Olo luntu esilwenzileyo sonke, kwiimeko zethu ezahlukeneyo:
… Indawo, ulwimi, abasebenzisi, abaphuhlisi, iinkampani, iiyunivesithi; Iingcali kunye nabaphathi ... isamba esenza iqela elityhala nzima kwisiza ngasinye sokwenza umdla oqhelekileyo.
Enye yezona zinto zibalaseleyo eziza nolu shicilelo ngamava abasebenzisi, ndonelisekile lilinge laseMexico apho ngokuqinisekileyo kufuneka ungene ngamandla amakhulu, usazi ukuba ucango luvuliwe ngeUniversidad Veracruzana de Xalapa ... siza kubona ukuba kwenzeka ntoni kuba okuninzi okwenzekayo eMexico kuyaphindaphindwa kwi-Central America phantse yi-inertia. Ndikwabona ukuba iprojekthi ye "La Pala y el Melón" inika umdla, ethi inyathelo lentombazana eneminyaka eli-10 izakunika izifundo ezibalulekileyo hayi eCosta Rica kuphela kodwa kwilizwekazi liphela.
Ndincoma ukukhuphela umagazini, uyifunde, uyonwabele kwaye nangona sonke siphila kwindawo eyahlukileyo, kukho izinto ezininzi zokufunda apho.
Yintoni ekhusela isofthiwe samahhala ukuba ibe yinto yokwenene kuzo zonke iindawo zengcali?
Ukusebenza neprogram ye-free kodwa ukugcina izicwangciso zeprosoft software akuyona into efanelekileyo ...
Fumana ukuba ii-SME ezikhethileyo zeprosoft software ziyayeka ukubonwa kuphela njengolukhuphiswano phakathi kwabo ...
Ngaba i-GvSIG Association iya kuba ngumbutho ophendulayo kumzekelo omtsha?
Inyani yile yokuba kwinqanaba lobuchwephesha okanye lobuchwephesha, uluntu lubonakalisile ukuba lufikelele kwinqanaba. Ngoku sisebenza ekuthatheni inyathelo elilandelayo elisingise kwintlangano yeshishini; Kule nto, ngaphandle kwamathandabuzo, umceli mngeni unzima, kodwa sonke siyavumelana nokucinga kweSiseko: kungcono ukuhamba kunye, okanye njengoko i-Aesop yayibeka kwiminyaka engama-2,600 eyadlulayo: "Umanyano ngamandla."
Ngoku iba yinto enomdla, ukudityaniswa kunye nokwamkelwa kweemodeli. Igama "Ukusebenzisana" lisemngciphekweni, esiwabona ngokucacileyo kwiinkampani ezinikezela ngeenkonzo, endikholelwa ukuba ukuthembeka okuphezulu kunye nezibonelelo ziya kufezekiswa ngazo zombini ezi ndlela emva kokusebenza nzima nokuqonda umahluko -kwaye uqiniseke ukunyamezela-. Nangona kunjalo, kukho ilaphu elisikiweyo, njengakuthi badlala ixilongo ukuze abanye bazi, kwaye baphendule kuluntu olungabuzisi nje kuphela izisombululo zasimahla kodwa-kwaye kakhulu- by izisombululo ezizizo; Apha kuyakufuneka sifumane ubudlelwane obunomdla kunye nokulinganisela, kuba asifuni ukubulala nabani na kodwa endaweni yokuba bonke bakhuphisane ngokwemigangatho elinganayo; Ngaphandle kwalonto siyayeka ukuba "ngabadibanisi".
Ukubambisana ukuhamba kwiprosoft software?
Ndiyazi ukuba elona nani likhulu labasebenzisi abatyelele iGeofumadas, basebenza ne-AutoCAD, ArcGIS, Microstation okanye uGoogle Earth, ndiyazi nokuba uninzi lwabo lusebenzisa ngokungekho mthethweni iilayisensi. Kodwa ndiqinisekile ukuba ukuba nabaphulaphuli ababanzi yeyona ndawo ilungileyo yokwazisa, ngokulinganayo, izibonelelo zesoftware yokuvula kunye nokuvula; kuba (okwangoku) eyokuqala iyimfuneko kuzinzo lwecandelo kwaye okwesibini yimodeli eya kutshintsha indlela yethu yokubona ishishini kule minyaka ili-15 izayo.
Ityala geospatial yi umona, ekubeni izisombululo GIS udlule ezilindelekileyo software sokuthengisa, kodwa intsimi zobunjineli ibanzi kwaye ukuza kuthi ga CADs ezamahala bakude ekubeni ukhuphiswano nkqi, kungekhona engineering kwegama. …
Kanye ngeli xesha, ngaphezulu nangaphantsi siyaqonda apho i-OpenSource izakuya khona, kwaye siyaqonda ukuba zombini iimodeli (ngumceli mngeni) ziya kuhlala kunye kwixa elizayo nangona kancinci kancinci phantsi kweemeko ezilinganayo. Kusenokuvakala kunzima kwabanye ukucinga ngako, kodwa kunjengokuba besicinga ukuba kwixa elizayo apho Umthombo weKharityhulam ovulekileyoKuyamangalisa, sicinga iminyaka eyi-15 edlulileyo.
Lapha ungalanda umagazini
Apha ungalandela uluntu lwendawo.
Ulwimi lokuqala lweelwimi (IFrench)
Ummandla wokuqala wabantu (Campus yeGvSIG)
Post edlulileyo«Ngaphambilini IWoopra ye-iPad ilapha
Post Next IPhepha.li yenza elakho iphepha ledijithaliOkulandelayo »